जोन Favreu लेख्न र स्टार वार्स श्रृंखला उत्पादन गर्दछ ग्याजेट समाचार
जोन Favreau लेख्न र स्टार वार्स श्रृंखला उत्पादन गर्न
ईडर एस्टेबान | | हाम्रो बारेमा
डिज्नीले केही महिना अघि घोषणा गर्यो कि उनीहरू नयाँ स्टार वार्स त्रयीमा काम गरिरहेका छन्। गाथामा नयाँ फिल्महरू विश्वव्यापी रूपमा ठूलो सफलता भइरहेको छ, त्यसैले यो त्यस्तो कुरा हो जुन प्रशंसकहरूले आशा गरे। तर उनीहरूले थप परियोजना पनि घोषणा गरे। एक कार्य श्रृंखला जुन स्ट्रिमि service सेवामा डेब्यु हुन्छ त्यो डिज्नी रिलिज हुनेछ।
यो एक नयाँ प्रोजेक्ट हो र तिनीहरूसँग स्टार वार्स ब्रह्माण्डको विस्तार गर्ने प्रयास गर्दछन्। थप रूपमा, कम्पनीले यस नयाँ परियोजनाको पहिलो हस्ताक्षरको घोषणा गरिसकेको छ। र यो एक उच्च प्रोफाइल हस्ताक्षर हो। यो पक्का भएको छ कि जोन Favreau श्रृंखला लेखन र निर्माण गर्ने एक हुनेछ.
अहिले सम्म यो ज्ञात थियो कि गेम अफ थ्रोन्सका सिर्जनाकर्ताहरू यस श्रृंखलाका लेखकहरू हुन लागेका थिए। त्यसैले कुनै श doubt्का बिना यसको प्रति अपेक्षाहरू उच्च छन्। तर तिनीहरू केवल नामहरू हुन् जुन यस प्रोजेक्टको सम्बन्धमा चिनिन्थ्यो। अब हामी एउटा अर्को नाम थप्न सक्छौं।
साथै, यो नयाँ स्टार वार्तालाप प्रत्यक्ष कार्य श्रृंखलाको लागि पुष्टि गरिएको छ। तसर्थ, हामी एनिमेटेड श्रृंखलाको सामना गरिरहेका छैनौं। लुकासफिल्मले वर्षौंदेखि प्राप्त गर्न कोशिस गर्दै छ। त्यसोभए उनीहरूसँग अन्ततः यो पहिले नै छ।
जोन Favreau त्यसपछि लेखन र श्रृंखला को उत्पादन मा प्रभारी हुनेछ।। यद्यपि यस समयमा चित्रीकरण शुरू हुने मितिहरू बारे अझ बढी विवरणहरू खुलाइएको छैन। वास्तवमा, कुनै पनि सम्भावित कलाकारहरूको नाम प्रकट गरिएको छैन। यो ज्ञात पनि छ कि त्यहाँ पहिले नै केहि संकेतहरू छन् कि छैन।
केही समय अघि जर्ज लुकासले कोरुसकन्ट शहरमा अवस्थित एउटा श्रृंखला बनाउने विचार उठाए। यद्यपि यो परियोजना कहिले पनि सफल हुन सकेन। तर, अब उही छेउमा डिस्नीको साथ, सबै कुरा धेरै छिटो देखिन्छ। तेसैले पहिलो स्टार वार्स श्रृंखला चाँडै नै एक वास्तविकता हुनेछ.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » जोन Favreau लेख्न र स्टार वार्स श्रृंखला उत्पादन गर्न
अमेजनको इको स्पिकरहरू कुनै स्पष्ट कारणको लागि आफैमा हाँस्न शुरू गर्छन्